Rights group slams arrest of journalist over Grace Mugabe 'used underwear' story | News24
Cape Town - A rights group has slammed the recent arrest of Zimbabwean daily newspaper journalist Kenneth Nyangani, adding that this was “a deliberate tactic to harass and intimidate him and other journalists in order to deter them from doing their work”.
This follows reports that the police in the southern African country have arrested the journalist after he reported that a ruling Zanu-PF MP distributed used underwear to supporters on behalf of First Lady Grace Mugabe in the eastern city of Mutare on Monday.
In a statement on Tuesday, Cousin Zilala, Executive Director of Amnesty International Zimbabwe, demanded Nyangani’s “immediate and unconditionally release and all charges against him dropped”.
He added: “Zimbabwean journalists should not be criminalised simply for doing their work.”
Confirming the arrest, Lawyer Passmore Nyakureba said that his client was in “custody at Mutare Central Police Station".
Read more on: amnesty international | grace mugabe | zimbabwe | southern africa